Hiran State - News: Gudiga doorashooyinka oo ay u soo dhamaatay siminaarkii.
Gudiga doorashooyinka oo ay u soo dhamaatay siminaarkii.
Kenya:- Gudiga doorashada ee baarlamaanka Somaliya ayaa loogu soo gabagabeeyay magaalada Nairobi ee dalka Kenya siminaar ku saabsan hanaanka doorasho ee lagu wado in bisha June ee soo socoto inay dhacdo,taaso oo ay soo qabanqaabisay hay’adda NDI.gudigaan oo dhamaantood ah mudanayaal baarlamaan ahna kuwa diyaarin doona doorashada soosocota ayaa ugudanbeyn lagu wadaa iney dalka dib ugu laabtaan maalmaha soo socoda.
Afhayeenka gudiga doorashada ee baarlamaanka Somaliya Xildhibaan Xareed oo isagu ku sugan magaalada Nairobi ayaa sheegay in siminaarka uu u socday mudo afar maalmood islamarkaana ay ka barteen waxyaabo badan oo ku saabsan doorashada.waxaana uu sheegay inay ka mid yihiin waxyaabaha ay barteen .
Qaabka loo maamulo doorashada
Inlaga ilaaliyo wax isdaba marsiin xiliga cod tirinta.
waqtiga doorashada, qodbada laga doonayo musharaxiinta xilkaasi u taagan iyo ugu danbeyn Qaabka loo maarayn lahaa hadii xubnaha gudiga qaarkood isku soo taagaan qabashada xilalka madaxwaynaha iyo gudoonka baarlamaanka iyagoo siminarkan ka qeyb qaatay.
Afhayeen Xareed ayaa sheegay in ay si deg deg ah ugu laaban doonaan magaalada Muqdisho si’ay ugutaan waajibaadka doorasho ee saaran gudiga.
Gudiga Doorashada ee baarlamaanka oo ka kooban 30-xubnood ayaa waxaa horay u magacaabay afhayeenka baarlamaanka Shariif Xasan isagoo cuskanaya qodoba u fasaxaya inuu gudigan soo magacaabo gudoomiyaha baarlamaanka qodobadaasi oo kala ah 32 iyo 33 ee axdi qarameedka u degsan xukumada kumeel gaarka ah..
Golaha Amaanka ee QM, urur goboleedka Igad, Afircan Unionka iyo dowaldaha Yurub ayaa horey ugu baaqay in ay Somaliya ka dhacdo doorasho hadii la doonayo in uu dalkaasi ka baxo kumeel gaarka.
Dhinaca kale warar hada inaga soo gaaraya magalada Mogdisho ayaa shegaya in magaalada 24kii saac ee ugu danbeysay lagu soo deeyey dhalinyaro ku hubeysan Bistoolado oo ay ujeedadoodu tahay iney bartilmaameedsadan gudoonka baarlamaanka iyo inta u ololeyneysa in ay dalka ka dhacdo doorsho.Dhalinyaradaan ayaa lagu soo waramayaa iney horey ugu shaqeyn jireen midowkii maxaakiimta oo hada ay howl galiyeen masuuliyiin aan dooneyn iney wadanka ka dhacdo doorasho.
Ishawarka Hiiraan State
· admin on May 17 2011 12:35:43 · 0 Comments · 1589 Reads ·
14,589,344 unique visits